Tonizia: Mpianatra nofonjàna noho ny tafatafa nifanaovana tamin’ny Media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2009 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Swahili, Deutsch, Italiano, Français, বাংলা, Português, македонски, English
Nanjavona tamin'ny 24 Oktobra 2009 teo i Mohamed Soudani, mpianatra Toniziana, 24 taona, rehefa avy nanao resadresaka tao an'ny Radio Monte Carlo International sy Radio France International.
Tsy hita efa ho 18 andro i Soudani mandra-piantson'ny mpitandro filaminana ny fianakaviany hilazana amin'izy ireo fa voatazona any amin'ny fonjan'i Murnaguiya tokony ho 15km miala an'i Tunis renivohitra izy.
Raha ny voalazan'ireo loharanom-baovao, nilaza tamin'ny fianakavian'i Soudani ihany koa ny mpitandro filaminana fa nandalo fitsarana izy ary voaheloka noho ny “fitondrantenany tsy mendrika” nandritra ny nitazonana azy tsy natrehan'ny mpisolovava ka dia voaheloka 4 volana an-tranomaizina. Ren'ireo fianakaviany ihany koa fa efa nampakatra ny didy fanamelohana azy izy.
Nandritra ny fotoana nitsarana azy tamin'ny 6 Desambra, nolavin'i Soudani avokoa ireo fiampangana azy ary nolazainy fa nampijaliana sy nanaovana herisetra izy nandritra ny fitazonana azy talohan'ny fotoam-pitsarana. Nangataka fanemorana ireo mpisolovava azy mba hahafahana mandinika lalindalina kokoa ny raharaha sy momba ny onitra haloa hanafahana azy. Nolavina ny fangatahana fanafahana ho azy raha nahemotra kosa ho amin'ny 14 Desambra 2009 ny fitsarana.
Nanontaniana an'i Soudani ny mikasika ny lasany fony izy mpitarika ny Fivondronamben'ny Mpianatra ao Tonizia [General Union of the Students of Tunisia]. Nandray anjara izy tamin'ilay 56 andro fitokonana tsy hihinan-kanina niaraka tamina mpianatra efatra hafa nitaky ny zon'izy ireo hahazo miverina an-dakilasy. Nampitain'izy ireo isan'andro tamin'ny alalan'ny blaogy ny fizotry ny fitokonana tsy hihinan-kanina nataony, ao amin'ny blaogy iray izay noraràna any Tonizia.
Vondrona Facebook iray sy blaogy iray no noforonina ho fanohanana an'i Mohamed Soudani ao anatin'izao ady sarotra lalovany izao.
Nasser Weddady dia nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity.